Root sy TWRP amin'ny Samsung Galaxy S6 | Androidsis
Amin'ny lahatsoratra manaraka, misaotra hatrany ny lehibe Chainfire nataon'i XDA, Hasehoko anao ny dingana tsotra harahinao mba hahafahanao mametraka ny fanarenana nohavaozina TWRP amin'ny Samsung Galaxy S6 ary rahoviana, ho an'izay liana, Root Samsung Galaxy S6.
Alohan'ny hanohizako an'ity fampianarana tsotra azo ampiharina ity izay hanazavako ny dingana arahinao Ampidiro ny Recovery TWRP amin'ny Samsung Galaxy S6 ary Root it, tokony ho fantatrao fa izany hanafoana ny fiantohana ofisialy an'ny fitaovana satria hisy fiantraikany amin'ny counter counter an'ny Samsung Knox amin'ny fotoana iray mety handikana ny endri-javatra ny Samsung Pay. Ka raha mandroso ianao dia eo ambanin'ny andraikitrao tanteraka.
2 Ilaina ny fisie handefasana ny TWRP amin'ny Samsung Galaxy S6 ary hamaka izany
3 Ahoana ny famolavolana TWRP amin'ny Samsung Galaxy S6
Ity tutorial ity dia namboarina flash TWRP novaina fanarenana amin'ny Samsung Galaxy S6 Amin'ny endriny rehetra, mety hiasa amin'ny Samsung Galaxy S6 Edge aza izy io na dia tsy afaka manome antoka aza isika. Zava-dehibe ny fampidirana ny terminal izay alefa amin'ny alàlan'ny fikirakirana Android. Nafenina matetika ity safidy ity, mba hahafahantsika mandeha tsy maintsy halehantsika Fikirana / Momba ny telefaona ary kitiho impito ny fiarovana manangana isa.
Ho setrin'izany, ilaina ny fananana haavon'ny batterie tsara, soso-kevitra mihoatra ny 50%ary koa apetraho tsara ireo mpamily Samsung ka ny solosaina manokana miaraka amin'i Windows dia manaiky ny fitaovana ampifandraisina tsara ary i Odin dia tsy mitatitra tsy fahombiazana aminay. Ho azonao ity farany misintona sy mametraka an'i Kies avy amin'ny tranonkala Samsung ofisialy ary mandrindra ny Samsung Galaxy S6 anao voalohany.
Ilaina ny fisie handefasana ny TWRP amin'ny Samsung Galaxy S6 ary hamaka izany
Sintomy ary Odin 3.10.6 miampy ny maodelin'ny CF Auto Root izay mifanitsy amin'ny maodelin'ny terminal anao avy amin'ity rohy ity ihany.
Ahoana ny famolavolana TWRP amin'ny Samsung Galaxy S6
Raha vao sintonina dia hongotanay na aiza na aiza amin'ny solosaina Windows anay ary Hamoaka ny rakitra Odin 3.10.6.exe amin'ny alàlan'ny alàlan'ny mpitantana izahay.
Ity sary ity dia manondro ny fomba tokony hijeren'i Odin alohan'ny tsindrio Start.
Izao amin'ny bokotra milaza hoe PDA, ho hitantsika ary hisafidy ilay rakitra CF AutoRoot.tar.md5 ary hataonay antoka, rehefa asehoko anao amin'ny pikantsary mifandraika ho fitarihana, fa ilay boaty RE-Partition tsy voafantina, Miverina aho, ny fizarana RE dia tsy tokony hojerena.
Ankehitriny dia hijanona eo ihany izany avereno ao amin'ny maody Download ny Samsung Galaxy S6 amin'ny fampifangaroana ny bokotra Power + Home + volume down, ampifandraiso amin'ny PC izay mihazakazaka Odin ary kitiho ny bokotra Start.
Ny dingana dia ho vita ao anatin'ny iray minitra ary Hanana ny fanarenana efa niandrasana nandrasana hatry ny ela izahay sy Root namaky ny Samsung Galaxy S6. Manoro hevitra anao izao alohan'ny hanohizanao amin'ny zavatra hafa, hanaovana backup, nandroid backup ny rafitra fiasan'ny Samsung Galaxy S6 iray manontolo. Hetsika tena ilaina io ary afaka mamonjy ny ain'ny terminal raha sendra tsy mandeha amin'ny laoniny na tsy mazava ny famafana zip.
Raha te hiditra amin'ny fanarenana nohavaozina amin'ny Samsung Galaxy S6, ny sisa ataonao dia ny famonoana azy hatrany amin'ny alàlan'ny fitazonana ireto bokotra manaraka ireto:
Hery + Fandraisana + Volume up
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Ahoana ny fametrahana TWRP modified Recovery amin'ny Samsung Galaxy S6 ary hamaka izany
ZTE Nubia Z9 terminal hafa misy écran curved